कास्की काँग्रेस सभापतिमा किशोरदत्त बराल विजयी – Gandak News
फेवातालमा विदेशी पर्यटक मृत भेटिए
पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा…
त्रिविका सम्पूर्ण परीक्षाहरु स्थगित
कास्कीका २४१ सहित गण्डकीमा थप ६२७ जनामा कोरोना…
भारतमा एकैदिन ३ लाख भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि
बेलायतमा सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन नपर्ने
बागलुङमा ४ वर्षीय छोरासहित महिला बेपत्ता
एकैदिन एक हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति…
कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कास्कीमा राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता कार्य स्थगित
अर्को साता दैनिक २० हजार संक्रमित हुने !
एकैदिनमा ११ हजार ३५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, घट्यो पीसीआर परीक्षण शुल्क
हारेका ३ जनाको विज्ञप्तीबाजीले सुदीपमोहनलाई 'ब्याक फायर'
गण्डक न्यूज द्वारा १२ मंसिर २०७८, आईतवार ०९:१९ मा प्रकाशित 0
पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्कीको सभापतिमा किशोरदत्त बराल निर्वाचित भएका छन् । पहिलो चरणको मतदानमा सर्वाधिक मत ल्याएका बरालले दोस्रो चरण जीत सुनिश्चित गरे ।
पहिलो चरणमा सबैभन्दा कम मत ल्याएका ३ जनाको समर्थन पाएका उम्मेदवार सुदीपमोहन भट्टराईलाई हराउँदै कार्यकर्ताले बराललाई जिल्ला नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा दिएका हुन् ।
शुक्रबार भएको निर्वाचनमा सभापतिका ५ उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत नल्याएका कारण काँग्रेसको विधान अनुसार शनिबार फेरि मतदान भएको थियो । दोस्रो पटकको मतदानमा १ हजार ९ सय २६ मत खसेकामा बरालले ९ सय ९५ मत पाउँदा भट्टराई ९ सय १५ मतमा सीमित रहे । बरालले शुक्रबारको मतदानमा ६ सय ४४ र भट्टराईले ४ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
सभापतिको लागि बराल, भट्टराई सहित आइबहादुर गुरुङ, पोषनाथ शर्मा र गिरिराज गौतम चुनावी मैदानमा थिए । गुरुङले ४ सय ६२, शर्माले ३ सय ३५ र गौतमले ६३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
हारेका ३ जनाले विज्ञप्ति नै निकालेर भट्टाराईको पक्षमा मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मतदाताले त्यो आग्रहलाई लत्याउँदै बराललाई सभापतिमा निर्वाचित गरे ।
आइबहादुर, पोषनाथ र गिरीराजले थोरै मत ल्याएर बाहिरिएपछि सुदीपमोहनको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । उनीहरूको विज्ञप्तिले कार्यकर्ताहरू भड्किएको सन्दर्भ गण्डकन्यूजले हिजै सार्वजनिक गरेको थियो । सुदीपमोहनको समर्थनमा यसरी विज्ञप्तिबाजीमै उत्रनु थियो भने पहिल्यै ३ जनाले किन सुदीपमोहनको समर्थन नगरेको ? भन्दै कार्यकर्ताहरू बिच्किएको देखिएका थिए ।
विज्ञप्तीबाजीले सुदीपमोहनलाई उल्टै घाटा हुने हो कि भन्नेमा सुदीपमोहनकै समर्थकहरू चिन्तित थिए । पहिले आफै लड्ने र हारिसकेपछि सुदीपमोहनका लागि विज्ञप्तीबाजी गर्दा दोस्रो दिन लाइनमा उभिएर मतदान गर्ने कार्यकर्ताहरु रुष्ट देखिन्थे । बरालबाहेक सबै नेता संस्थापन इतरका हुन्
पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा अनेरास्ववियुको…
कास्कीका २४१ सहित गण्डकीमा थप ६२७ जनामा कोरोना संक्रमण…
शुक्रबार कास्कीका ९५ सहित गण्डकीमा थप १८६ जनामा…
शनिबार कास्कीका ८० सहित गण्डकीमा थप २०६ जनामा…
कास्कीमा थप निषेध: स्कुल कलेज, दाेहाेरी, हाटबजार…
गण्डकी प्रदेशमा बस भाडा बढ्याे- पाेखरामा बस स्टप…
पसलमा बसिरहेकी महिलालाई पेस्तोल देखाई…
बालकले ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने भन्दै…
पोखराको सिमपानी र फुलबारीबाट २३७ एम्पुल…
navigate to this website justfap